Ra’iisul wasaaraha Soomaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo u dhoofay Norway. | Somali National Television - sntv.so
Home DHAQAALAHA Ra’iisul wasaaraha Soomaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo u dhoofay Norway.
Ra’iisul wasaaraha Soomaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo u dhoofay Norway.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda FS Mudane Xasan Cali kHayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u amababaxay magaalada Oslo ee dalka Norway, halkaas oo ay kaga qaybgalayaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto.
Oslo Forum oo ah madal caalami ah ayaa sanadkan waxaa ka soo qaybgalaya wufuud dalal badan ka socota iyo madaxda golayaasha waawayn sida xoghayaha guud ee Qaramada Mdoobay oo lagu casuumay.
Soomaaliya waxa ay shirka la tagaysaa ajandayaal ay ka mid yihiin inay dunida ku qanciso isbadalka balaaran ee ay ka samaysay dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo dawlad wanaagga, sida uu sheegay Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo wafdiga qayb ka ah.
Maanta waxaan safar shaqo u raacey Reysulwasaare Mudane Xasan Ali Kheyre waxaan u soconaa sida aan aduunka ugu qanci laheyn isbedelka Maaliyadda iyo Dhaqaalaha wadanka mudada ay jirtey xukuumada Nabad iyo Nolol. pic.twitter.com/LWOiuNWiTb
— Dr Abdirahman Beileh (@DrBeileh) June 17, 2018
Ra’iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa in sidoo kale uu kalamo gaar gaar ah la qaato madaxda shirka ka soo qaybgalaysa.
Previous articleDuqaymo ka dhacay gobolka Gedo oo khasaaro loogu gaystay Al-shabaab.
Next articleWasaaradda Kaluumeeysiga iyo Kheyraadka Bada oo digniin u dirtay kaluumeysatada Soomaaliyeed